Global Voices teny Malagasy » Ejipta: Tetikasa-na kilasy Iray Lasa Fikambanana Mpanao Asasoa Anisan’ny Goavana Indrindra Ao Ejipta · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 29 Oktobra 2011 16:28 GMT 1	 · Mpanoratra Tarek Amr Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Ejipta, Fampandrosoana, Fanabeazana, Mediam-bahoaka, Tanora, Vonjy Voina, Katroka 7 Miliara
Mpanolotena Resala mampianatra ny mpianatra jamba – sary Resala
Tamin'ny taona 1999, nody tao Ejipta avy any Kanada rehefa nahavita ny fianarana nahazoany diploma Ph.D. momba ny Elektrika sy ny Jenian'ny solosaina i Sherif Abdel-Azim . Nampianatra ny Etikan'ny Jenia (engineering) amin'ny mpianatra Anjerimanontolon'i Kairo izy, ary niresaka ihany koa ny fahasamihafan'ny fikambanana mpanao asa-soa any Ejipta sy any Kanada.
Nanapa-kevitra ny hanangana vondrona mpanao asa-soa tsy voasoratra ara-dalàna antsoina hoe Resala (Misiona) i Abdel-Azim sy ny mpianany. Nanomboka nanome servisy tamin'ny mpianatry ny anjerimanontolo sy amin'ny olona ankapobeny ry zareo – tahaka ny fampianarana maimaipoana sy fanomezana fanampiana ny toerana fitaizana zaza kamboty sy ny hopitaly. Toerana iray taty aoriana, nanolo-kevitra ny iray ramin'ny mpianany fa tokony hanangana toerana fitaizana zaza kamboty ry zareo. Nanolotra tany hananganana izany ny iray tamin'ny havan-drazazavavy. Nanomboka tamin'io fotoana io dia nisoratra anarana ho fikambanana ofisialy mpanao asa-soa ry zareo – izay antsoina ihany koa hoe Resala [ar] .
11 taona atty aoriana, io no iray amin'ny fikambanana mpanao asa-soa lehibe indrindra any Ejipta, izay manana sampana 50 misandrahaka manerana ny firenena, an'aliny ny mpanolo-tena, ary maro isan-karazany ny zavatra sahanina  izay ahitana fanomezan-dra sy trano fitaizana kamboty ka hatramin'ny fiadiana ny tsy fahaizan-taratasy. Manampy ny jamba amin'ny fianarana  ataony ihany koa amin'ny fandraketana ny boky ho kasety, by recording books for them on cassettes, ary manavao ny akanjo tonta ka manome ireny ho an'ny mahantra. Sy zavatra hafa maro ihany koa.
Tamin'ny vola mey farany teo , nasain'i TEDxCairo  i Sherif Abdel-Azim, mpanorina ny Resala, mba hanome fitenenana ny fikambanana, ny tantara ijoroany vavolombelona  sy ny momba fanoloran-tena amin'ny ankapobeny [ar].
Tamin'ny 2008, Ashraf Al Shafaki, mpamaham-bolongana mpanolo-tena ao amin'i Resala, nanoratra bolongana milaza ny fanangonana fitafiana fanao isan-taona  hanaovana asa-soa sy hanangonam-bola:
Mandritra ny volana Ramadany  tamin'ny herintaona (2007), nikendry ny hahangona fitafiana iray hetsy avy amin'ny mponina manerana an'i Ejipta amin'ny alalan'ny sampana 7 ao Kairo sy 2 ao Alexandria ny Resala . Rehefa nifarana ny Ramadany tamin'ny herintaona, nihoatra noho izay nokendren'ny Resala no azo fa roa hetsy ny fitafiana tonta voaangona!
Avy eo izy nanoratra hoe nampakatra ny tanjona hanangona fitafiana miisa telo hetsy indray ny Resala tamin'ny 2008. Mbola nihoatra ny isa notratrarin'ny Resala indray no azo fa nahangona nihoatra ny 1.000.000 sahady ry zareo raha mbola tsy ampy 30 nanangonana akory.
Nanavaka ny akanjo nomena izay voasasa sy voapasoka 500.000 ny mpanolotenan'ny Resala. Ny ambin'ny akanjo nomena dia amidy amin'ny vidiny mirary ho an'ny olona tena sahirana any amin'ny distrika mahantra manerana an'i Ejipta amin'ny alalan'ny fampirantiana 3 andro akaikin'ny fonenan'izy ireny. Ny vidin'ny akanjo isanisany di aeo anelanelan'ny 50 cents sy $1 ka ny tena faratampony dia ambanin'ny $3 ho an'ny akanjo tena lafo. Ity fomba fanao ity no anararaotan'ny fianakaviana mahantra maka fotoana mandritra ny fampirantiana mifidy sy mifantina izay akanjo tiany araka izay ilainy. Izany moa mba hahatsapan-dry zareo fa mividy akanjo amin'ny volany ihany ry zareo.
Ny vola azo avy amin'ny fivarotana akanjo tonta moa dia alefa any amin'ny asa isan-karazany sahanin'ny Resala, miaraka amin'ny fanomezana [hafa] voangona  mba hiodina hatrany ny raharaha.
Atrikasa fampianarana solosaina Resala. Saripika Telecenterpictures ao amin ny Flickr (CC-BY-NC-SA)
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2011/10/29/24691/
 Resala [ar]: http://www.resala.org
 maro isan-karazany ny zavatra sahanina: http://abdelmonem-89.blogspot.com/2008/11/resala-egypts-leading-ngo.html
 Manampy ny jamba amin'ny fianarana: http://en.wikipedia.org/wiki/Resala_%28organization%29
 ny tantara ijoroany vavolombelona: http://www.resala.org/stories
 bolongana milaza ny fanangonana fitafiana fanao isan-taona: http://shafaki.wordpress.com/2008/09/30/resala-clothing-day-2008/
 ny volana Ramadany: http://en.wikipedia.org/wiki/Ramadan#Charity
 fanomezana [hafa] voangona: http://www.resala.org/pages/how_to_donate